Hogaamiyaha golaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 27 ka hogaamiye ee midowga Yurub kulan ay ku yeesheen in midowga Yurub uu taageeray heshiiska qorshahaasi iyo waliba cahdi siyaasadeed oo ku aadan mustaqbalka xidhiidhka Britain iyo Midowga Yurub.
Hesiiskan ayaa cayimaya waqtiga ay Britain ka baxayso oo ah 29-ka bisha March iyo waliba hanaanka xidhiidhka mustaqbal ee ay yeelan doonaan labada dhinac.
Raysal wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa hada waajahaysa shaqo adag oo ah inay heshiiska ka dhaadhiciso baarlamaanka midowga Britain oo aan la malayn Karin.
Maalintii shalay ayay sidoo kale madaxweynaha golaha Midowga Yurub Donald Tusk iyo raysal wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ay isla meel dhigeen xalka mustaqbalka Gibraltar oo ah dhul ku yaala xeebta koonfureed ee dalka Spain, arintaasi oo meesha ka saartay caqabadii hortaalay kulanka midowga Yurub uu ka yeelanayay si uu u taageero qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa heshiiskan la gaadhay ka waraystay Axmed Rayaale Buux oo xubin ka ah xisiga NVA ee dalkaasi islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Antwarpen.
Dhageyso wareysiga Brexit